Umxholo awuyi kuguqula ngaphandle kweefowuni ezenziwayo | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoJuni 14, 2013 NgoLwesihlanu, ngoJuni 14, 2013 Douglas Karr
Nyanga nganye Martech Zone iya kuvelisa uninzi oluninzi lwezikhokelo ze Inkxaso, intengiso kwaye kokubonisana amathuba. Njengoko indawo iyaqhubeka nokukhula ekuthandeni, nangona kunjalo, besingaboni kunyuka okulandelayo kwezikhokelo. Ekugqibeleni ndandinayo-ndayihlalutya indawo kwaye ndayijonga apho bekukho ukubizela ezenzweni. Yinto esiyihlawula kakhulu kubaxumi bethu kodwa ndiphumelele ukuphonononga izicwangciso zethu zokwenza izinto ngokufanelekileyo.
Kukho ukubekwa kwesi-3 okuqhelekileyo kweefowuni zakho zokuthatha amanyathelo kulo naliphi na iphepha elinikiweyo kwindawo yakho.
Ukusasaza ngaphakathi -Le yeyona CTA yomeleleyo, ukubeka ikhonkco, iqhosha, okanye umfanekiso ofanelekileyo kumxholo wakho uya kuguqula abo banomdla ofunda umxholo owabelane ngawo.
Eyona nto -Uya kuqaphela ii-CTA ezithile ezinamandla nezimileyo ezikufutshane nomxholo wethu. Siqinisekisile ukuba zikufuphi kwi-RSS feed, indawo yethu ephathekayo kunye nezicelo zethu eziphathwayo, nazo.
site -Ezi zii-CTA ngokubanzi ezithile kwiimveliso kunye neenkonzo ezibonelelwa lishishini lakho. Njengoko abantu beqhubeka nokufunda umxholo wakho, uninzi luya kuba nomdla wokuba ungabanceda njani… ii-CTA ezibanzi zesayithi njengentloko kunye nentengiso yonyawo.
Ngaphandle, ewe, ngamaphepha akho okufika. Ukufika kwamaphepha kufuneka kube yindawo ekuyiwa kuyo- hayi indawo yezinye ii-CTA kunye nokhetho. Ukujonga iphepha kwindawo yakho, ngaba amaphepha akho akhiwe ngokuqinileyo kwimisebenzi yokuhambisa-ngaphakathi, kufutshane, nakwindawo yonke?
Asikenzi okwangoku, kodwa silonyusile inani lethu lezikhokelo ukusuka kwi ~ 5 ngenyanga ukuya ngaphezulu kwe-140 ekhokela ngenyanga. Olu luphuculo lwetshathi! Ngaphandle kokutshintsha ivolumu yabantu abatyelele le ndawo. Indawo enye, umxholo ofanayo… kodwa a Ukuphuculwa kweenguqu ezingama-2,800% ngokuqinisekisa ukuba kukho ukubizelwa-kwinqanaba ngalinye lomxholo esiwenzayo. Ezi azikho-ebusweni bakho eziqhwanyaza iintengiso zebhanile… ngamaqhosha nje alula, imizobo okanye amakhonkco angumbhalo.
Ukufumana umnxeba wokwenza isenzo ngaphakathi komxholo kunye nendawo yakho kufanele kube lula. Abaphulaphuli bakho akufuneki bazibuze ukuba leliphi inyathelo abanokulenza ngokulandelayo, qiniseka ukuba baxelele ukuba mabenze ntoni emva koko. Ukuba ubaxelele, baya kuza.
Ngaba amaJelo eeNtlalo asiguqulela kwiiPsychopaths?